Isaia 49:14-26 "14 Fa hoy Ziona: Jehovah efa nahafoy ahy, ary ny Tompoko efa nanadino ahy. 15 Mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin’ny zanaka naloaky ny kibony? Eny, mety manadino ihany izy, Fa Izaho kosa tsy mba manadino anao. 16 Indro, efa vitako tombo-kavatsa eo am-pelatanako hianao, ary ny mandanao dia eo anatrehako mandrakariva. 17 Tamy faingana ny zanakao; Ary izay nanimba sy nandrava anao dia miala aminao. 18 Atopazy manodidina ny masonao, ka mijere; ireo rehetra ireo dia mivory ka mankeo aminao; raha velona koa Aho, hoy Jehovah, Ireo rehetra ireo dia hihaingoanao tokoa tahaka ny firavaka sy hiravahanao tahaka ny fanaon’ny ampakarina. 19 Fa ny taninao rava sy ny fonenanao lao ary ny taninao simba dia tsy ho omby amin’izany noho ny habetsahan’ny mponina, ary ho lasa lavitra ireo nihinana anao. 20 Ny zanakao izay efa lasa teo dia mbola hilaza eo an-tsofinao hoe: Tsy omby ahy loatra ity tany ity, Mikisaha kely mba hitoerako. 21 Dia hanao anakampo hianao hoe: Iza no niteraka ireto ho ahy? Fa efa maty ny zanako, ary nitsaha-jaza aho. Babo aho sady noroahina, koa iza no namelona ireto? Indro, nilaozana ho irery aho, fa taiza kosa moa ireto? 22 Izao no lazain’i Jehovah Tompo; Indro, hanandratra ny tanako amin’ny jentilisa Aho ary hanangana ny fanevako amin’ny firenena; dia hitrotro ny zanakao eo an-tratrany ireo, ary ny zanakaovavy ho entiny eny an-tsorony. 23 Mpanjaka no ho rainao mpitaiza anao, ary zanakavavin’andriana no ho reninao mpampinono anao; hiankohoka amin’ny tany eo anatrehanao izy ka hilelaka ny vovoka amin’ny tongotrao; Dia ho fantatrao fa Izaho no Jehovah, ka tsy ho menatra izay miandry Ahy. 24 Azo alaina eny amin’ny mahery va ny sambotra? Na ho afaka va ny babo marina? 25 Nefa izao no lazain’i Jehovah: Na dia ny sambotry ny mahery aza dia halaina ihany, ary ho afaka ny babon’ny mpandrombaka; fa Izaho no hiady amin’izay miady aminao, ary Izaho no hamonjy ny zanakao. 26 Sady hampihinaniko ny nofon’ny tenany ihany izay mampahory anao, ary ho leon’ ny ran’ny tenany ihany ireny, toy ny amin’ny ranom-boaloboka; dia ho fantatry ny nofo rehetra fa Izaho Jehovah no Mpamonjy anao, ary Ilay Maherin’i Jakoba no Mpanavotra anao."
Mampionona (14-21). Toa mahatsiaro nafoy sy adinon’Andriamanitra i Ziona (14). Andriamanitra mahatoky anefa Izy, ka maneho ny fitiavany tsy misy fetra ary tsy misy fepetra, toy ny fitiavan’ny reny ny zanany (15). Eo ambany masony sy jereny ary arahiny mandrakariva ireo tiany sy tia Azy (16). Vokatr’izany, hanisy fiovana mahagaga eo Ziona Izy. Izay nanimba sy nandrava an’i Ziona dia ho levona (17). Ny zavatra nampalahelo teo aloha hiova fifaliana (18-19), ary ny tany foana lasa mahavokatra sy ho feno zanaka (20-21). Fampiononana sy fampaherezana tsy misy toa izany! Firifiry moa ny fiainan’olona rava vokatry ny fahotana: fimamoana, famonoan’olona, fijangajangana, fandaingana, fangalarana, fanompoan-tsampy, … Rehefa nibebaka dia nandray an’i Jesosy ho Mpamonjy sy Tompo, dia nafahany, ka miaina fiainam-baovao ao Aminy! “Raha ny Zanaka no hahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo” (Jaona 8:36). Mandray an-tanana (22-26). Manome toky Andriamanitra fa hamonjy, hanafaka amin’ny fomba mahagaga. Hanery ireo firenena (22), ireo mpanjaka sy andriam-bavy hanatanteraka ny sitrapony. Na mahery toa inona aza ny fahavalo dia horombahany eny an-tànany ny zanany (24- 25). Noho izany, ireo rehetra izay manantena Azy dia tsy ho menatra (23b). Tena mpitsara marina, mpiaro, mpanafaka, mpamonjy, mpiady mahery Andriamanitra (22, 25-26). Hitan’ny rehetra ny fahalehibiazany sy ny heriny (26). Tsy toy izany koa ve ny nataon’i Jesosy Kristy? «Izao no nisehoan’ny Zanak’Andriamanitra, dia ny handrava ny asan’ny devoly.» (1Jaona 3:8b). Aza matahotra ary, fa fahavalo efa resy ny devoly!
Vavaka: «Omeo hery aho Tompo ô mba hatoky Anao hatramin’ny farany!»